Gini bu ahia ma olee otu osi aru oru? Nke a bụ usoro azụmaahịa | Ozi ECommerce
Encarni Arcoya | 28/07/2021 23:11 | Emelitere ka 28/07/2021 23:16 | eCommerce
Ịzụ ahịa n'ịntanetị na -arịwanye elu. Ọtụtụ amalitela ịtụ egwu ịzụ ahịa n'ịntanetị na azụmaahịa ahụkwala na eCommerce nwere ike bụrụ ezigbo uru iji nweta uru. Mana, n'ime ụdị azụmaahịa dị n'ịntanetị, n'ọma ahịa na -abawanye, ụdị azụmaahịa ebe a na -eji ọhụhụ ma na -enweta nsonaazụ ọma.
Ma, Gịnị bụ ahịa? Kedu ka o si arụ ọrụ? Ọ dị mma nke ukwuu dịka ị chere? Ọ bụrụ na ị na -eche maka isiokwu a, ị ga -enwe mmasị ịmara ozi niile anyị nwere ike ịnye gị n'okpuru.
1 Gịnị bụ ahịa
1.1 Ahịa vs eCommerce
2 Uru na ọghọm ya
3 Ụdị ahịa ahịa
4 Ihe atụ
Gịnị bụ ahịa
Ka anyị malite na nke mbụ, mara nke ọma ihe ahịa bụ na ihe anyị na -ekwu maka ya. Ị ga -agarịrịrịrị na echiche a na -ezo aka na a ikpo okwu nke etinyere ya, ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ, azụmahịa, ika, mana ọtụtụ n'ime ha. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị mepụtara webụsaịtị bụ "Storelọ Ahịa Ngwa." N'ebe ahụ, dị ka azụmahịa, ị ga -anọ. Mana ọ tụgharịrị na ị nwere enyi nke nwekwara azụmahịa yana onye gị na ya ga -ere ngwaahịa ha na webụsaịtị gị.
Katalọgụ gị na -abawanye, mana ị ga -abụkwa ahịa, n'ihi na ọ dị ka a ga -asị na ị mepụtara ahịa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ga -ere ngwaahịa ha.
Ọbụna dị mfe: were ya na ahịa ahịa n'obodo. Ha nwere ebe a na -ere mkpụrụ osisi, ebe azụ, ebe a na -egbu anụ, wdg. Ọ dị mma, n'ọma ahịa ahụ bụ otu, ọ dị ka ebe ịzụ ahịa ebe ị na -ere ọtụtụ ngwaahịa na ị na -eme dị ka onye na -etiti n'etiti ndị ahịa na ndị na -ere ahịa (ọ bụrụ na ọ bụ gị bụ onye mepụtara ụdị azụmaahịa ahụ).
Ahịa vs eCommerce
ECommerce ọ dị mma maka gị ka ọ bụ ahịa ka mma? Ọ dị mma, eziokwu bụ na ha bụ ụdị azụmaahịa dị iche iche, mana ewepụghị ha.
Dị ka ị maara, Otu eCommerce bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe a na -ere ngwaahịa. Ọ bụ gị ka ọ dị n'aka ibuga ha n'aka onye ahịa ma ị na -elekọta ime ka azụmaahịa gị hụ.
N'aka nke ọzọ, ebe a na -ere ahịa bụ “ọgbakọ” nke ụlọ ahịa ebe ị nọ. N'ụzọ dị otu a, mgbe onye ahịa rịọrọ ihe, ị na -ezigara ha, mana ị gaghị echegbu onwe gị maka ịkpọsa azụmahịa gị, ma ọ bụ ndozi weebụsaịtị ahụ, ebe ọ bụ na onye nwe ahịa ahụ na -elekọta nke ahụ. Ọtụtụ oge ọ bụghị naanị gị ka ị ga -ere ngwaahịa ahụ, mana ọ bụ ikpo okwu na -elekọta ya, na mgbakwunye na -elekọta ịbụ onye nnọchi anya n'etiti ndị ahịa na ndị na -ere ahịa.
Gịnịkwa mere anyị ji asị na ewepụrụghị ha? Ọ dị mma, n'ihi na ị nwere ike nweta eCommerce nke gị yana, n'otu oge, bụrụ akụkụ nke ahịa. N'ezie, anyị nwere ihe atụ doro anya na Amazon. N'ime ya ị ga -ahụ ọtụtụ puku ụlọ ahịa kpebiri ịbanye na katalọgụ ha ma na -ere ngwaahịa ha. Mana n'otu oge ahụ, ọtụtụ nwere ibe weebụ ha nke ha na -eme dị ka ụlọ ahịa (na -enwekarị ọnụ ahịa ma ọ bụ nke dị ala karịa na Amazon) ka ị nwee ike zụta ha site na ọwa abụọ ahụ.
Uru na ọghọm ya
Ihe ọma ọ bụla nwere ihe ọjọọ. Na ntụle. N'ọnọdụ ahịa, anyị enweghị ike ịgwa gị na ihe niile ga -adị mma, mana na ọ nwere uru ya kamakwa ọ nwere ndọghachi azụ ya na, itinye ma n'ọ̀tụ̀tụ̀ ga -enyere gị aka ikpebi ma ị ga -eso na ya ma ọ bụ gaa n'ihu dị ka ọ dị na mbụ.
N'izugbe, na uru ị nwere ike ịhụ bụ:
Nwee ihe niile. N'ịbụ ikpo okwu nke gụnyere ọtụtụ azụmaahịa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịghara ịchọta ihe ị na -achọ. Na mgbakwunye, ị ga -enwe otu ngwaahịa nwere ọnụ ahịa dị iche iche, yabụ na ị gaghị achọ iche iche iji chọta nke kacha mma.
Ọhụhụ. N'ihi ngwaahịa gị, yana azụmahịa gị n'ozuzu, ga -enwe ike irite uru na ahịa ahịa, na -eme ka ị gaa n'ihu.
Ị nwere ọwa ahịa ndị ọzọ. Maka na, dị ka anyị kwuru, ịnọ n'ahịa apụtaghị na ị ga -ahapụ eCommerce gị. Ị nwere ike ịga n'ihu na -ere mana nwekwuo ebe ị ga -enweta uru.
Ịre ahịa mba ofesi. Ọtụtụ n'ọma ahịa na -arụ ọrụ n'ụwa niile, na -enye gị ohere ịzụta ebe ọ bụla n'ụwa. N'ezie, ị nwere ike ịtọ ọnụ ahịa iji zipu ngwaahịa, ya bụ, ị gaghị efu, kama merie.
N'ọnọdu. Ọ bụrụ na ịchọtaghị, anyị ga-agwa gị: ụdị azụmaahịa a na - anọ n'ọnọdụ ọfụma, ya bụ, ọ na - apụta na nsonaazụ mbụ na Google. Ma nke ahụ bụ ego.
Ugbu a, n'agbanyeghị uru ndị ahụ niile (enwere ụfọdụ ndị ọzọ), kwa nsogbu ma ọ bụ ọghọm na -ebilite. Dịka ọmụmaatụ:
Ị ga -enwe obere uru. Nke a bụ maka, maka ịbụ nke ahịa, ị ga -akwụ ụgwọ kwa ọnwa yana, na mgbakwunye, ha na -edobe ọrụ n'aka ahịa ha na -ere.
Enwere ụgwọ mpụga. N'echiche na ị ga -echekwa ngwaahịa, zute oge nnyefe, nloghachi, wdg. Ị nwere ike na -arịọkarị ka ha lekọta ya, mana ụgwọ a nwere ike ịdị elu.
A naghị akwụ ya ụgwọ ugbu a. Ọ nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa iji kwụọ ụgwọ, ihe dị na eCommerce gị, dị ugbu a.
N'akụkụ n'akụkụ asọmpi ahụ. N'ebe a ọ na -esiri ike ịghara ịsọ mpi. Ọ na -esikwa ike ịmata onwe gị na ya.
Ezi "nna ukwu" bụ n'ọma ahịa. Ọ na -ekpebi ngwaahịa ọ ga -ahụ na ihe agaghị ahụ, ihe ọ ga -azụta na ihe ọ gaghị ahụ. Ma n'ezie, nke ahụ bụ nnukwu mwepu n'ihi na, ọ bụrụ na ha elepụtaghị anya na ngwaahịa gị, ị gaghị enwe ike ree.
Ụdị ahịa ahịa
Ugbu a ị matara ntakịrị banyere ihe ahịa bụ, ị kwesịrị ịmara na enwere ụdị ahịa ahịa atọ a kọwara nke ọma:
Nke ngwaahịa, dabere na ire ngwaahịa enyere site na ụlọ ahịa agbakwunyere na ụdị a.
Ndị ọrụ, na -enye, ọ bụghị ngwaahịa n'onwe ha, mana ọrụ ma ọ bụ ọrụ ka ha nwee ike igbo mkpa ndị ahịa.
Ọrụ, ya bụ, ndị na -ejikọ ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara. Ndị a bụ ihe kacha sie ike ijikọta na echiche nnukwu ụlọ ahịa a.
Iche echiche n'ọma ahịa dị mfe ugbu a. Dị ka ihe atụ, i nwere Amazon, Aliexpress, eBay, Wish, Joom… Mana enwerekwa ndị ọzọ nke ị maghị, mana nke a aghọọla ihe a. Dị ka El Corte Inglés, Fnac, Carrefour, wdg.
Ha niile na -ere ngwaahịa ha mana, na ịntanetị, ha na -enye nhọrọ nke ịgbasa katalọgụ ha na ngwaahịa ndị ọzọ nke ndị ọzọ na -achịkwa, ndị na -ere ahịa na -eji ikpo okwu ha eme ka ihe ha na -ere pụta ìhè.
Ugbu a ị matarala ụdị azụmaahịa a, ị ga -esonye n'ọma ahịa? Ị nọ n'otu? Gwa anyị gbasara ahụmihe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ ahịa ahịa yana kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Kedu ihe dị iche n'etiti mgbasa ozi na ịre ahịa?